कुन धर्म पुरानो ? | BodhiTv
कुन धर्म पुरानो ?
विभिन्न सम्प्रदायका धर्माधिकारीहरु आफ्नो धर्म पुरानो अरूको नयाँ भन्ने गर्छन्। के उनीहरूले धर्म के हो भन्ने बुझे त? अहिले प्रचलित धर्महरू कुनै १६/१७ सय वर्ष पुरानो, कुनै २००० वर्ष पुरानो, कुनै २५०० वर्ष पुरानो हो हाम्रो धर्म १ अर्ब कति करोड कति लाख कति हजार र सय वर्ष पुरानो भन्ने गरेको सुनेको र देखेको छु । जनसाधारणले भने त नबुझेकोले भनेको भन्न् हुन्थ्यो धर्माधिकारीले नै भने पछि अनि त्यसले बेग्लै अर्थ दिन्छ । धर्म कसैले बनाउने हो ? अनि उ जन्म्यो र बन्यो, चल्यो यस्तो हो ?
बैज्ञानिकहरूले भन्छन् यो पृथ्वीमा प्राणीहरूलाई नभई नहुने अक्सीजन बन्न् थालेको २ अर्ब वर्ष भयो । प्राणीहरूको उत्पत्ति हुने विकास क्रममा मानिसको प्रादुर्भाव १ अर्ब वर्ष पहिले देखि भयो होला।अब धर्म भनेको यो पृथ्वीमा मात्र हुन्छ र पृथ्वीको उत्पतिको धेरै पछि मात्र धर्मको प्रादुर्भाव भएको हो त? ब्रम्हाण्डमा यो पृथ्वी जस्तो ग्रहहरू उत्पति हुँदै विनाश हुने गरेको कुरा हाम्रो धर्म सबै भन्दा पुरानो १ अर्ब वर्ष भन्दा पुरानो भन्नेलाई थाहा छ कि छैन ? धर्म पुरानो हुँदैमा उत्कृष्ट हुने भए बुद्धधर्म स्वत: उत्कृष्ट हुन्छ। गौत्तमबुद्धले बताएर जानुभएका बुद्धहरू मात्रै पनि २८ छन् । कुनै कल्पमा १ बुद्ध उत्पन्न भएको छ, कुनै कल्पमा बुद्धको उत्पति नै हुँदैन । यो भद्रकल्पमा ३ बुद्धहरू उत्पन्न भए र ती सबै हालको नेपालमा नै भए ।
अहिलेको गौत्तम बुद्ध ४ असंख्य र १ लाख कल्प अगाडि सुमेध नामको ऋषि थियो । अब ऋषि भन्ने वित्तिकै त्यो त हिन्दू हो भन्न पुग्छ। ऋषि न त हिन्दू थियो न त कुनै धर्मको थियो । उ उत्कृष्ट जीवन जिउने कलाको खोजीमा थियो । उसले दिपंकर बुद्धको पालामा दिपंकर बुद्ध आउने हिलाम्य बाटो सफा गर्ने क्रममा केहि हात लम्बाईको बाटो सफा गर्न बाँकी छँदै दिपंकर बुद्ध आउनु भयो। बुद्धलाई हिलोमा टेक्न दिनु उचित नभएकोले त्यो लम्बाईभरी आफू सुतेर आफ्नो जिउमा टेकेर जानुहुन विनम्र निवेदन गर्यो।दिपंकर बुद्धले यसलाई मैले टेक्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर ध्यान दृष्टिले हेर्दा हुन्छ भन्ने भए पछि उसको जिउमा टेकेर जानु भयो र तिमीले यो केको लागी गरेको भन्दा म पनि तपाई जस्तै सम्यकसम्बुद्ध बन्न चाहन्छु भन्दा ध्यान दृष्टीले हेर्दा ४ असंख्य र १ लाख कल्प पछि उ सम्यक सम्बुद्ध बन्न सक्ने भएकोले त्यहिबेला सम्यक सम्बुद्ध बन्ने छौ भनिदिनुभयो। अब गौत्तमले बुद्ध हुने अनुमति एक सम्यक सम्बुद्धबाट पाउनु पर्ने थियो, त्यो अनुमति पाए पछि नै पनि २४ बुद्धहरूको प्रादुर्भाव भईसकेको छ।त्यो भन्दा अगाडिको ३ बुद्धहरूको र अब बन्ने मैत्रेय बुद्धको नाम समेत वताएर जानु भएको छ । त्यो भन्दा अगाडि कति बुद्धहरू थिए भन्ने कसैले बताउन सक्दैन। किनभने सम्यक सम्बुद्धहरू अनन्त छन्। त्यसको संख्या गर्न सकिन्न।अब बुद्धधर्म कति पुरानो छ त?
गौत्तम बुद्धले वताउनु भएको २८ बुद्धहरू मध्य पछिल्ला ७ बुद्धहरू मात्र यस पृथ्वीमा जन्मेका हुन्। जसलाई सप्तबुद्ध भनिन्छ। जस मध्य ३ बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्। तब २१ बुद्धहरू पृथ्वी बन्नु भन्दा पहिले अरू पृथ्वी जस्तै प्राणीहरू बस्न लायक ग्रहहरूमा जन्मेका हुन् । त्यसैले धर्मलाई कुन सबभन्दा पुरानो हो ? भनेर प्रश्न खडा गर्ने विषय नै होइन । यी कुरा गर्नेहरू दार्शनिक विचारधाराका हुन् । दार्शनिक तवरले नै भन्ने् हो भने धर्म अनेक छैन, एक पनि छैन । किनभने अनेक नभए पछि एक कसरी हुन्छ? धर्म छ मात्र । त्यो धर्म न त पुरानो हुन्छ न त नयाँ हुन्छ । सनातनको शुरू र अन्त्य हुँदैन । त्यसैले नयाँ र पुरानो पनि हुँदैन । कुनै निर्मित धर्म मात्र बनेको समय अनुसार नयाँ र पुरानो हुन्छ।
बुद्धले भन्नु भएको छ, मैले कुनै नयाँ धर्म बनाएको छैन। यस ब्रम्हाण्डमा उत्पन्न भएर लुप्त भएको धर्मलाई नै प्रकाशमा ल्याएको हो। मैले वताएको शिक्षा सनातन हो, यो पहिले पनि थियो। बुद्धशासन लुप्त भए पछि फेरी अर्को बुद्धको प्रादुर्भाव भएर प्रकाशमा ल्याई दिन्छ। त्यो प्रकाशमा ल्याएको धर्म त्यो बुद्धको धर्म होइन, त्यो बुद्धले बनाएको होइन।अहिले देखिएका अनेक धर्महरू बनाईएका हुन्।त्यसैले मेरो धर्म पुरानो अरू धर्म नयाँ हुन् जस्ता कुराले विश्वमा धेरै ठूला युद्धहरू भईसकेका छन्। धर्म युद्ध, झगडाको लागी हुँदैन।किनभने धर्म अनेक नभए पछि झगडाको गुञ्जायस नै रहँदैन।आजलाई यत्ति नै। भवतु सब्ब मंगलं।